Waa Maxay Oo Sidee Ayuu U shaqeeyaa Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waa maxay Instagram oo sidee ayuu u shaqeeyaa Instagram?
July 16, 2019 0 comments 978
Maalmahan casriga ah ee aan ku helnay nafteena, waxaa jira codsiyo badan, ciyaaro, shabakado bulsho, iyo kuwo kale, iyadoo bulshada ay u baahan tahay wax soo saar badan. Taasi waa sababta maskaxda maskaxda ku jirta waxaa soo ifbaxay qaab caan ah oo hada la isticmaalo bulshada. Iyo si aan wax badan uga sii ogaano waxa aan uga wada hadli doonnaa waxa ay Instagram tahay iyo sida ay u shaqeyso, labadaba dadka ku cusub dalabka iyo kuwa doonaya in ay xitaa sahamiyaan.
Waa codsi guur-guura oo loogu talagalay inuu noqdo shabakad bulsho isla mar ahaantaana taas oo aad ku gali karto sawirro iyo fiidiyooyo iyo waxyaabo badan oo ay ka kooban yihiin. Qalabkiisa ayaa laga heli karaa iPhone, iPad, iPod taabashada, Android iyo adoo soo dejinaya emulator moobaylka sidoo kale kumbuyuutarrada.
Markaad sawir qaadatid oo aad duubto fiidiyow, waad ku hagaajin kartaa miirayaasha ay soo bandhigaan shabakada bulshada, si aad uga siiso bilicda wanaagsan oo aad uga dhigto shacbiga aad leedahay.
Bartilmaameedka ayaa ah 90% muuqaal waana tan ugu weyn, taas oo ka dhigtay mid caan ka ah bilowgiisii ​​ilaa waqtigan. Tani waa sababta oo ah hal-abuurayaashu waxay u sameeyeen iyada oo ku saleysan jawaab celinta jawaabta dhiirrigelinta maanka aadanaha leeyahay. Tusaale ahaan: waxay barteen in 90% xogta loo gudbiyo maskaxda ay tahay mid muuqata oo muuqata, sidaa darteed sawirada waxaa lagu socodsiiyaa bini aadamka 70 kun jeer oo ka dhakhso badan qoraalka. Sidoo kale waxaa la qiyaasayaa in 40% dadku ay sifiican uga jawaabaan macluumaadka muuqaalka ah marka loo eego qoraalka fudud.
Taasi waa sababta sawir qaadista ay u bixiso waxyaabo aad u fudud oo dheellitirnaan iyo qadarin leh. Xaqiiqdii kuma dhacayso dareenka qofka sida qoraalku yahay. Waana sidan sida loo isticmaalo, miirayaasha, xirmooyinka, dib u soo celinta, midabada vintage iyo waxyaabaha la midka ah ee kuleylka ah ee loo isticmaali karo dalabka.
Dhanka kale, mid ka mid ah astaamaha Instagram waa kaas oo adeegsadayaashu ku qiimeyn karaan waxyaabaha qof kale qalbigiisa ku leeyahay isla markaana ay kula wadaagaan aaladda lafteeda iyo shabakadaha kale ee bulshada sida Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, kaas oo ka dhigaya dalabku mid aad u fiican oo hiddaha ay ka mid tahay.
Sidee ayey Instagram u shaqaysaa maxaase loogu talagalay?
Codsigan wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku sawiraan sawirro iyo fiidiyooyo muuqaalkooda ah, halka ay wax ka beddeli karaan waxyaabahaas kalasooca kaladuwan ee kaladuwan ee bilaashka ah iyo nashqadeynta caadiga ah ee aad ku xisaabtami karto. Hadda oo ay tahay Instagram iyo sida ay u shaqeyso way fududahay in la fahmo.
Hawlaheeda gudeheeda waxaad sidoo kale ku horumarin kartaa tobanka aaladood ee hal abuurka oo aad u badali karto iftiinka, fadhiga iyo isbarbardhiga, si la mid ah hooska, aragtida iyo muujinta. Dhanka kale sidoo kale, waad ka heli kartaa dadka aad raaci karto adigoo ku saleynaya xisaabaadka iyo waxyaabaha ay sida ugu fiican u jecel yihiin. Waxa intaa u dheer inay ku xidhaan qalabkan ay adduunka ku nool yihiin oo ay ka falceliyaan sawirradooda iyo fiidyadooda maalin kasta. Hadana haddii aad rabto inaad keydiso waxyaabo qaar si aad ugu dirto saaxiibbadaa waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa farriin khaas ah.
Instagram gabi ahaanba waxaa looga isticmaali karaa aaladda moobiilka, laakiin sidoo kale waxay leedahay nooc desktop ah, in kasta oo ay ku xaddidan tahay isticmaalkeeda, maaddaama aadan sawirro qaadi karin ama karin karin karin wax ku jira, Waxay u adeegtaa uun si loo arko waxa ay isticmaaleyaasha kale soo geliyaan.
Inta badan caannimada shabakadan bulshada ayaa ah qeyb ka mid ah ogaanshaha in Instagram yahay iyo sida ay u shaqeyso, sidoo kale waa sababta oo ah markii hore waxay dejisay fikradaha qaarkood.
Bilowga dalabka, dhaleecayn badan ayaa u soo food saartay dadka isku yeera inay sawir qaadayaal u yihiin xaqiiqda fudud ee awood u lahaanshaha isticmaalka saameynta iyo miirayaasha sawirradooda. Qaabka loo isticmaalo qaab astaan ​​muuqaal farshaxan leh ayaa sidoo kale la dhaleeceeyay qof kasta iska leh. Laakiin waxaas oo dhan maanta way is beddeleen sababta oo ah aaladdaani waxay muujisay inay taasi ka sii gudubto marka aad hore u ogtahay waxa Instagram yahay iyo sida ay u shaqeyso.
Saddexda sano ee ugu horeysa waad arki kartaa sida waqtigan muhiimka ugu yahay koriimadiisa iyo habka soonka iyo joogtada ah ee ay u sii wadatay caanaheeda ilaa maantadan la joogo.
2010: sanadkaasoo dalabka la abuuray oo lagu horumariyey Kevin Systrom iyo Mike Krieger. Isla sanadkaas natiijooyinka ayaa ka fiicnaa sidii la filayay, tan iyo markii dalabka uu maamulayo inuu gaaro milyankiisa isticmaale ee ugu horreeya, kaliya isagoo ka dhigaya macruufka laga heli karo Apple App Store.
2011: Kaliya hal sano ka dib waxay leedahay saldhig adeegsade weyn oo ku filan inuu haysto waqti yar oo lagu bilaabo. Xaqiiqdii, koritaanka ayaa aad ugu badatay intaas Bishii Juun waxay lahayd 5 milyan oo isticmaale iyo bishii Sebtember oo ay ku jirtay malaayiin 10 ah. Waxay ahayd xilligan labaad in haashtayaasha lagu daro si loogu isticmaalo meeleeynta iyo kooxaynta sawirrada la wadaago.
2012: runtii barnaamijku wuxuu ku dhacaa caankiisa sanadkaan. Waxayna bilaabmaysaa bisha Febraayo marka shaandhe cusub oo loo yaqaan "Lux" lagu daro, taas oo wali la heli karo. Waxay ahayd waqtigan markii ay gaadhayso 80 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon Bishii Luulyo, iyada oo noocaas loo heli karo nidaamka hawlgalka ee Android kaas oo lahaa milyan milyan oo la soo degsado kaliya maalinta koowaad.
Ka dib seddexdii sano ee ugu horreysay si loo ogaado waxa Instagram tahay iyo sida ay u shaqeyso
2013: Waqtigaan wixii ka dambeeya, dalabka waxaa laga gali karaa kumbuyuutarrada, laakiin haynta xaddidaadaha uusan ku laheyn nidaamyada mobilada, xaaladdan wali waa mid jirta. Dareenkan iyo waxyar kadib markay bixisay nooca shabakadda, 100 wuxuu gaadhay malaayiin isticmaaleyaal firfircoon. Marka xigta, ikhtiyaarka ah in lagu calaamadeeyo asxaabta iyo awoodda lagu dhejiyo fiidiyowyo gaagaaban ee ilbiriqsiyo 15 ayaa lagu daray.
2014: daabacaado la soo abaabulay ayaa soo ifbaxay, taas oo dhalisay in dad badan ay shirkaduhu ku daawadaan madasha Taasi waa sababta interface ka sameysan yahay aalado cusub oo ay diyaariyeen wakaalado u saamaxaya cabiridda falanqaynta, saameynta iyo natiijada ka soo baxda nuxurka. Oo kanu wuu fiicnaa loogu talagalay kuwa doonayay inay u isticmaalaan Instagram si ay u sameeyaan suuqgeynta dhijitaalka ah. Xaqiiqdii, markan, interfaceku wuxuu ahaa mid horumarsan maadaama ay soo bandhigtay fursado badan oo loogu talagalay tafaftirka iyo wax ka badalka sawirada, oo leh isbeddelo iftiimaya, midabbo iyo codad.
2015: Shirkadaha waa sanad weyn oo ay ku sameyn karaan fiidiyowyo 30 ilbiriqsi oo loogu talagalay xayeysiinta badeecadooda iyo sidoo kale adeegsadayaasha joogtada ah. Sheeko kale oo soo baxday sanadkaan ayaa ah codsi ku xiran barta Instagram-ka ee la yiraahdo "Boomerang" oo ka kooban 5 sawir oo bilaa cod ah oo si joogto ah loogu celceliyo.
2016: sanadkaan dalabku wuxuu bixiyaa suurtogalnimada iskuxirka in kabadan hal koonto, iyadoon looxirin kal-fadhiga si dib loogu eego muuqaal kale. Dhinaca kale, suurtagalnimada in lagu soo dhowaado sawirrada horey loo daabacay waxaa la bilaabay Agoosto, ficil lagu gaaro soo dhaweynta aadka u wanaagsan ee isticmaalayaasha. Iyo dabcan "sheekooyinka Instagram" taas oo inbadan oo kamid ah ay tahay qaybta loogu jecelyahay si dib loogu eego arjiga, iyadoo ay ugu wacan tahay dabiicadda ay bixisay iyo astaamihiisii ​​ugu weynaa ee la waayey ka dib saacadihii 24 markii la daabacay nuxurka.
Waqtigan xaadirka ah waxay ku jirtaa horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si ay uga dhigto dhammaan isticmaaleyaasheeda inay ku farxaan oo ay siiyaan qalabkii ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan ​​codsiga.
Sideed ugu guuleysan kartaa Instagram?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa Abuur astaan ​​guud si ay si sahlan u helaan kuwa raacsan. Kadib meel sawir wanaagsan oo sawir leh dhammayso isla markaana dhammeystir macluumaadka lagu weydiisto magacaaga, taleefan lambarkaaga iyo taariikh nololeedkaaga oo tusaysa waxa aad jeceshahay.
Maaddaama Instagram ay tahay shabakad bulsho marka hore sawirrada, waa inaad Soo gal sawirro tayo leh oo saameyn ku leh oo daawadayaashaadu jeclaan karaan. Sidan ayaad u heli doontaa quluub badan iyo kuwa raacsan, waxaad ilowdaa sawirro badan oo aan ku biirin wax fal celin ah, iska hubi in dhammaantood ay wanaagsan yihiin xitaa haddii ay yaryihiin.
Si loo helo aragtida waxaan kugula talineynaa isticmaalka hashayaasha, laakiin aan ahayn mid la buunbuuniyey, in kasta oo ugu badan ee loo oggol yahay codsigu inuu yahay 30, laga bilaabo 5 illaa 11 ayaa ugu fiican. Xaqiiqdii, habkan waxaad ku heli kartaa raacdo badan, waxaad raaci kartaa isticmaaleyaasha ku daba socda, qiimeeya oo kaqeybqaada dhageystayaashaada si isdhaxgalka uu u noqdo mid raaxo leh.
Jiritaanku waa muhiim, ha ka badin laakiin ha ku seexin hirarka toosan, waa inaad heysataa heersare wanaagsan si aad u soo geliso waxa ku jira. Dareenkan iyo haddii aad leedahay astaamo shirkadeed, sababa badan awgeed waa inaad la socotaa qoraalada oo dhan si dhagaystayaashaada looga wargaliyo dhamaan avane-yadaada.
Arrinta la xiriirta inaad yeelato astaan ​​guud, waa inaad iskudaydaa inaadan noloshaada shakhsiga ah la dhex gelin shaqada, waxaa lagu talinayaa inaad raacdo raacdo nooc kasta oo astaan ​​ah.
Hadana waa kii ugu dambeeyay laakiin uguyaraan maadaama aad ogtahay waxa Instagram tahay iyo sida ay u shaqeyso, ku raaxeyso waqtiga aad ku buuxineyso arjiga, in dhammaan waxyaabaha aad soo dirto ay dhawrto. nuxurka shakhsigaaga sidaa darteed wax walbaa waa asalka oo waxaad ku qaadi kartaa daawadayaasha mid kasta oo ka mid ah sawirradaada iyo fiidiyahaaga.
2 Sidee ayey Instagram u shaqaysaa maxaase loogu talagalay?
3 Sheekada Instagram
3.1 Ka dib seddexdii sano ee ugu horreysay si loo ogaado waxa Instagram tahay iyo sida ay u shaqeyso
3.2 Horumar cusub
4 Sideed ugu guuleysan kartaa Instagram?
Iskuxiraha instagram kala xiriir Facebook
Markay Instagram kuu cadeyso